नथाकेका हातहरू – Rural Television
यसपाली हिउंद देखि छ्यासी वर्ष टेके । काम नगरी वस्नै सक्दिन दिनभरि डोको बुन्यो, बस्यो । दिन त यस्सै गइहाल्छ । उमेरमा वाह्खरि सिक्न पाइएन । वाच्नकै लागि पनि केही सिप त सिक्नै पर्यो । दाजुले केटौले उमेरमै डोको बुन्न सिकाए । यो जाने पछि अहिले बुढ्यौलीमा दिन कसरी कट्ला भनेर के चिन्ता पर्यो…. चित्रसिंह गोपाली, बज्रवाराही गाउ,वडा नम्बर ६, मकवानपुर जिल्ला ।
पसिनाको मूल्य !!
अरुणको विजुली कहिले बल्ला !!
सौर्य उर्जा र लिफ्ट सि‌ंचाइको संयोजन
व्यावसायिक तरकारी खेती
मनहरी गाँउको नमूना सहकारी